Uru ịzụrụ 100,000 TikTok Na-eso ụzọ & Nlele 100,000
Jiri mkpọsa nkwalite na Social Media iji kwalite vidiyo gị.
Ọ na - enyere aka ịmanye gị na mmetụta “Viral” na ezigbo ndị na - eso ụzọ & Echiche
Ngwa ruru eru maka ihe TikTok Onye Okike Fund chọrọ.
Mee ka ohere ị nweta ego maka ịnwe ego.
Ndammana anapụta ruo mgbe mezue iji.
100% nchekwa & rube isi na iwu TikTok.
Nyochaa ma nye atụmatụ maka mmepe mmepe.
Enwere ike itinye ego TikTok?
Dị ka ịmara, TikTok ewegharala usoro mgbasa ozi mmekọrịta! Na ihe karịrị 800 nde nọ n'ọrụ ndị ọrụ nke ngwa si n'akụkụ ụwa nile. Enwere ọtụtụ ohere maka TikTokers iji kpata ego n'elu ikpo okwu a.
Yiri YouTube & Facebook, TikTok ka weputara mmemme akpọrọ TikTok Onye Okike Ego. Nke ahụ bụ, na-enye ndị mmadụ ohere ị nweta ego site na vidiyo vidiyo. Ebumnuche bụ isi bụ ịgba ndị nrọ ume iji olu ha na ihe okike mee ego wee bido ọrụ na ikpo okwu ha.
Agbanyeghị, enwere ụfọdụ chọrọ na ịkwesịrị imezu iji ruo eru maka Ego Okike.
Yabụ, gịnị bụ ihe ahụ?
Kedu ihe ndị achọrọ iji ruo eru maka TikTok Onye Okike Ego?
Onye Okike nke zutere njirisi ndị a nwere ike iru eru maka TikTok Onye Okike Ego:
Nwee ma ọ dịkarịa ala ndị na-eso ụzọ 100,000
Nwee ọ dịkarịa ala vidiyo vidiyo 100,000 n'ime ụbọchị 30 gara aga
Ndi bi na US, UK, France, Germany, Spain ma obu Italytali.
Dịkarịa ala afọ 18.
Nwee akaụntụ dabara na TikTok Ntuziaka na usoro ọrụ.
Ndị okike ndị tozuru ntozu ntozu nwere ike itinye akwụkwọ n'ime ngwa TikTok site na akaụntụ pro / kere ihe.
Kedu ihe kpatara m ga - eji zụta ndị na - eso ụzọ 100K na nlele 100K?
Dị ka ị maara, TikTok nwere ọtụtụ nde akaụntụ na-ebipụtalarị ọtụtụ puku vidiyo na-ekpuchi niches na ọdịnaya gị niile.
Ọbụna vidiyo ahụ dị mma. Ọ ka na-ama aka maka TikToker ọhụrụ iji rute 100,000 Ndị na-eso ụzọ & Nlele 100,000 n'ime ụbọchị 30 iji ruo eruo maka mmemme Onye Okike ma ọ bụrụ na ị bulite vidiyo ahụ na-enweghị ịkwalite mkpọsa n'ihi na vidiyo anaghị abịaru ọnụ ọgụgụ ziri ezi nke ndị na-ege ntị.
Ọzọkwa, iwulite ọtụtụ ndị na-ege ntị chọrọ itinye oge na ego. Ma echegbula, anyị ga-akwado gị iji ọrụ ntinye ego TikTok iji dozie nsogbu a ngwa ngwa.
Nke a bụ nkọwa zuru ezu banyere otu anyị si enye Ndị na-eso ụzọ 100,000 TikTok na nlele 100,000:
Dị ka ọtụtụ ọrụ ụlọ ọrụ anyị, anyị dabere na nyiwe mmekọrịta Social Media dịka Facebook Group, Instagram, iji kwalite vidiyo gị na ndị nwere ike ịnụ egwu metụtara vidiyo gị. Site n'ụzọ ahụ, ndị mmadụ ga-abịakwute vidiyo gị ma soro ma ọ bụrụ na nke ahụ na-adọta ha dị ka ọ dị na mbụ. Yabụ, anyị ga-aga n'ihu na-ebido vidiyo ruo mgbe ewepụtara ọnụọgụ ndị na-eso ụzọ ịzụrụ.
Kwalite vidiyo na Social Media ga-eme TikTok maka akaụntụ gị maka izi ezi ya. Ọzọkwa, gị video nwere ike dịkwuo ohere nke "malitere ịrịa" mmetụta.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị bụ imezu TikTok Onye Okike Ego ihe omume a choro ma nweta ego site na vidiyo vidiyo, oru a bu ihe zuru oke. Ka anyị bido, ugbu a!